Ubume bemiSebenzi yobungakanani
Unokwenzeka ukuba lixesha esiqhelekileyo. Nangona kunjalo, xa ukhangela inkcazo yokuba kunokwenzeka, uya kufumana iindidi ezifanayo. Unokwenzeka ukuba sonke sijikelezile. Ubungakanani bubhekiselele kumathuba okanye amaxesha amaninzi okuba kwenzeka into. Ukuqhubela phambili kokunokwenzeka kukuwa naphi na okungeke kwenzeke nakwezinye naphakathi naphakathi. Xa sithetha ngethuba okanye iingxaki; amathuba okanye iingxaki zokuwina i-lottery , sibhekisela ekungenakwenzeka.
Amathuba okanye iingxaki okanye ukukwazi ukuphumelela i-lottery into enjengezigidi ezili-18 ukuya kweyesi-1. Ngamanye amazwi, amathuba okuwina iLotto ayinakwenzeka. Ababikezeli bemimoya basebenzise ithuba lokusichazela ukuba kungenzeka (ubunokwenzeka) beqhwithi, ilanga, imvula, ukushisa kunye kunye nazo zonke iimozulu zemozulu kunye nemikhwa. Uyakuva ukuba kunethuba eli-10% lemvula. Ukuze wenze esi sibikezelo, ezininzi iinkcukacha ziqwalaselwa kwaye zihlalutyo. Ingcali yezokwelapha iyasichazela ukuba kunokwenzeka ukuphuhlisa uxinzelelo lwegazi, isifo senhliziyo, isifo sikashukela, iziganeko zokubetha umdlavuza njl.
Kubaluleka Kwezinto Ezibonakalayo Ebusuku Bemihla
Ubungqina bube sisihloko kwizibalo ezikhulile kwizidingo zentlalo. Ulwimi lwentleko luqala nje ngohlobo lwentanga kwaye luhlala luhloko ngesikolo esiphakeme nangaphezulu. Ukuqokelela kunye nokuhlalutya kwedatha kuye kwagqithisa kakhulu kwikharityhulam yekharityhulam.
Abafundi benza amalinge ukuba bahlalutye iziphumo ezikhoyo kwaye babale iziganeko kunye neziganeko ezihambelanayo .
Ngoba? Ngenxa yokuba ukubikezela kubaluleke kakhulu kwaye kuncedo. Yilokho eqhuba abaphandi bethu kunye nabafundi beenkcukacha-zibalo abaza kuqikelela ngezifo, imozulu, ukunyanga, impilo efanelekileyo, ukhuseleko lomgwaqo kunye nokukhuselwa komoya ukubiza ezimbalwa.
Siyabaleka ngenxa yokuba sitsheliwe ukuba kukho i-1 yezigidi ezili-10 kuphela amathuba okufa ephahleni lendiza. Kuthatha uhlalutyo lwemali eninzi yolwazi ukuchonga amathuba / amathuba amanyathelo kunye nokwenza ngokuchanekileyo ngokunokwenzeka.
Esikolweni, abafundi baya kuqikelela ngokusekelwe kwiimvavanyo ezilula. Ngokomzekelo, baqhube idayisi ukuze baqikelele kangakanani ukuba baya kubhala 4. (1 ngo-6) Kodwa ngokukhawuleza baya kubona ukuba kunzima ukuqikelela nangaluphi na uhlobo lobulungisa okanye ukuqinisekiseka yintoni na isiphumo saso nasiphi na umqulu uya kuba. Baya kufumanisa ukuba iziphumo ziya kuba ngcono njengoko inani lezilingo likhula. Iziphumo zeenombolo eziphantsi zezilingo akuzona ezilungileyo njengoko iziphumo ziyinani elikhulu lezilingo.
Ngethuba lokuba amathuba okuba sisiphumo okanye isiganeko, sinokuthi inokwenzeka ukuba imicimbi yeso siganeko siza kubalwa ngenani leziphumo. Ngenxa yoko, i-dice, 1 kweyesi-6. Ngokuqhelekileyo, ikharityhulam yezemathematika izakufuna abafundi ukuba baqhube iimvavanyo, baqikelele ubulungisa, baqokelele idatha ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo, batyhicule baze bahlalutye idatha, babonise idatha baze bathethe umgaqo wokuba kwenzeka .
Isishwankathelo, iimeko zentleko kunye neepateni kunye nezindlela ezenzeka kwiziganeko ezingahleliwe.
Ubungqina bunceda sikwazi ukubona ukuba kunokwenzeka ntoni into eyenzekayo. Izibalo kunye nezifaniso zisinceda ukuba sinqume ukuba kunokwenzeka ngokuchaneka ngakumbi. Ukubeka nje, umntu unokuthi kusenokwenzeka ukufundwa kwithuba. Ichaphazela ezininzi iinkalo zobomi, yonke into evela kwiityikima ezenzekayo ukwabelana ngosuku lokuzalwa. Ukuba unomdla kunokwenzeka, insimu kwimathematika ofuna ukuyifumana iya kuba yinkcukacha yolawulo kunye neenkcukacha .
I-LPGA Ii-Rookies zonyaka: Zonke i-Award Winners
Imfazwe Yehlabathi II: USS Enterprise (Cv-6) kunye neMisebenzi Yakhe ePearl Harbour
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ze-Idaho
I-Tenor Fächer: Nguwuphi uhlobo lwe-Operatic Tenor nguwe?
Amashishini okuZitshintsha ngokuzenzekelayo - ATM